Guraandhalaa 25, 2020
Jara kana keessaa warra horii warshaa sibiilaa fi injineering METEC saamee saamsise,warra wal dhaba naannoo Binishaangul,ummata Sidaamaa hammeesse jara saba tokko eennummaa isaatiin miidhee fi warra bulchoota mootummaa guguroo ijjeesee mootummaa gara galchuun himatan faatti keessa jira.
Akka daarekterii daarekteroorta waajjira odeeffannoo abbaa alangaa addaa, Zinaabuu Tunuu jedhetti balleessaa jara kanaan himatan irraa dhaabuun jijjiirama biyyitii keessa jirtu jabeessuu.
“Faayidaa murtiin tun jijjiiramaa qabdu hubatanii faayidaa ummataa fi mootummallee laalanii yoo tokko tokko ammoo qooda jarii shakkame kun waan himataniin keessaa qabullee hubatanii waan himataniin kana irraa dhiisan.”
Walumattu mootummaan waan akkanaatiin nama 3,606 himate keessaa 1,682 yaayyuu qaban.Waan jaraan himatanillee fulaa afuritti qoodan;Ijjeehcaa,saba tokko eennummaa isaatiin miidhuu,haawwanii fi dubra buufachuu fi wanajala akka akkaaiin himata.
Warra waan himataniin keessaaa itti gaafatamaa damee nagaa biyya keessaa INSA, ka tahe koloneel letenaal Biniyaam Teweldee
Naannoo Somaaleetti itti gaafatmatuu dame haawwanii fi fi ijoollee, Rahimaa Mohaammad,naannoo Amaaraatti miseensa paartii ABN, Kiritiyaan Taaddelee fi abbaa qabeennaa Eermiyaas Amagala Leggesee fa.